Ra’iisul Wasaare Kheyre”dadaal ayaan ku bixin doonaa shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada” – WARSOOR
Muqdisho – (warsoor) – Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay dadaal dheer ay u gali doonto sidii Shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee waxbaratay.
Waxaa uuu sheegay in shacabka Soomaaliyeed boqolkiiba 70% ay dhalinyaro yihiin taasina ay muujinayso in fursadaha dalka ka jiraa ay badan yihiin.
Madaxda Wasaaradaha ayuu ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan sidii xirfaddo shaqo loogu sameyn lahaa dhalinyaradda ee waxbarashada dhamaysatay.
Waxaa uu sidoo kale tilmaamay in muhiim tahay in laga shaqeeyo sidii dhalinyaradda Soomaaliyeed ay waxbarasho u heli lahaayeen.
Ugu dambeyntii Kheyre ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed kula dardaarmay in ay ka qeyb qaataan xasilooni soo celinta dalka.
Guddiga madaxa bannaan ee xudduudaha oo kulan la qaatay Labada gole ee maamulka K/Galbeed